Tsvaga akanakisa nudist mahombekombe muAlmería | Kufamba Nhau
Almería yanga iri nzvimbo yezhizha kwemakumi emakore uye kumahombekombe ayo tinowana mamwe emahombekombe akanakisa muSpain yese. Hazvishamise kuti pakati pavo pane mamwe emahombekombe asina kusarudzika ayo ari anodikanwa nevashanyi. Iine makiromita mazana maviri nemakumi maviri emhenderekedzo yegungwa uye kwemakore mashoma yave iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevatendi, kwete kuSpain chete asi muEurope yese. Nudism yakauya ichibva kuGerman uye yakagara pamahombekombe edu, ichive nhasi chinhu chakasarudzika, zvekuti kune mahombekombe ayo.
Ngatitaurei nezvazvo mamwe emahombekombe enudist akanakisa anogona kuwanikwa muAlmería. Kana iwe uchida kutanga munyika yenudism, unogona kushanyira mamwe eparadhiso ayo ari zvakare makuru nzvimbo dzine jecha kwaunogona kunakidzwa uye kupisa zuva. Usakanganwa kunakidzwa neichi chiitiko kumahombekombe eAlmería.
2 Gungwa revakafa
3 Genoveses kumahombekombe
4 Mónsul Gungwa
5 Barronal pamhenderekedzo
Kana tichienda taura nezve nudism muAlmería pasina mubvunzo unofanirwa kutaura nezveVera Beach. Mumahombekombe mazhinji zvinotenderwa kuita nudism kana kushandisa sutu yekugezesa, asi kune vamwe zvinongobvumidzwa kuita naturism nekuti ivo vanozvisarudzira chete. Vera kumahombekombe ndeimwe yemahombekombe emasikirwo ayo kusatenderwa kushandiswa kweswimwear, ndosaka yakave imwe yenzvimbo dzinoshanyirwa kwazvo dzehupombwe. Muchokwadi, padyo nemahombekombe kune nudist urbanizations umo vagari vanogona kurarama hupenyu hwakajairika kunze kwegungwa vachiita nudism. Iri gungwa rakareba kiromita imwe uye munzvimbo ino tinogona kuwana hotera chete kuSpain, iyo Vera Playa Club.
Iri gungwa Iyo iri muNatural Park yeCabo de Gata uye ndeimwe yeanozivikanwa muAlmería. Iri mumasipala weCarboneros kune imwe nhambwe, sezvo 1600-mita yegungwa iri pakati penzvimbo yechisikigo, munzvimbo yerunako rukuru inoita kunge isina kusvibiswa. Kune nzira dzinoverengeka dzinoenda kumahombekombe asi kuti tisvike ipapo tichafanirwa kufamba, saka zvinokurudzirwa kuti tisatakure zvinhu zvakawandisa. Izvo hazvikurudzirwe kune vanhu vane zvishoma kufamba asi zviri zvechokwadi zvakakodzera rwendo. Iwo mahombekombe kwaunogona kuita nudism asiwo mitambo yakadai senge snorkeling nekuda kwayo sekristaro mvura yakajeka.
Aya ndiwo mamwe emahombekombe ari mupaki yepanyama uye ayo anozivikanwa nevashanyi vanobva kumativi ese epasi. Inowanikwa mubha uye ine nejecha rakanakisa regoridhe rinoipa iyo kuoneka kwakanaka, sezvo paine nzvimbo ine madhiramu madiki. Kuchamhembe kune dondo diki rekuchengetedza kubva kuzuva, richiita iro gungwa rakanakira kupedza zuva rese. Mukuwedzera, mvura yaro yakanyarara. Iyo inogara zvakaringana uye zvaive zvakajairika kuti vanhu vaonekwe vachiita nudism pese pamhenderekedzo yegungwa, kunyangwe zvisiri zvekumanikidzwa uye mazuva ano zvinowanzoitika kuchamhembe
Iri gungwa rinozivikanwa kwazvo kuva mune imwe ye 'Indiana Jones' mafirimu, asi zvakare iri imwe yenzvimbo dzakanakisa jecha muAlmería kwaunogona zvakare kuita nudism. Iyo inongova mazana mana emamita kureba saka inowanzo kuwanda mumwaka wakakwirira. Iyo inomira kunze kune ayo matombo mafomu emakomo anoputika uye nenzvimbo yedutu guru.
Kubva kuMónsul beach unogona kushanyira Barronal beach pamhenderekedzo. Kubva kunharaunda yayo yekumabvazuva isu tichafamba tichitevedza mahombekombe kusvika tatanga tasvika paBarronal cove uyezve pamhenderekedzo. Iri gungwa rakakura zvakapetwa kaviri pakukura kweMónsul uye rinozivikanwa nudist beach. Iyo ine nyore kuwana uye kuve pakati pemakungwa anozivikanwa zviri nyore kushanyira. Izvo zviri nani kuzivikanwa nudism kupfuura mamwe akadai saMónsul kana Los Genoveses kuitira kana tichida kutsvaga nzvimbo ine yakawanda nudist mhepo.
Kune avo tsvaga imwe nzvimbo yakangwara yekuita nudism uye pamwe isingazivikanwe semamwe mabhishi ndeye Cala del Plomo. Cove diki iri pakati penzvimbo dzine matombo uye kure nevanhu. Iyi cove inongori mazana maviri emamita kureba, saka haitipe nzvimbo yakawanda, asi yakakomberedzwa nemakomo emakomo, izvo zvinopa kubata kwevamwe izvo zvisina vamwe. Kune rimwe divi, igungwa rakanaka rine jecha regoridhe uye inoshamisa mvura yekristaro inokoka iwe kuti usvetuke uye kushambira kwemaawa. Kubva pane ino cove tinokwanisa kuwana dzimwe dziri padhuze seCala de En Medio, kwaunogona zvakare kuita nudism.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Nudist mahombekombe eAlmería aunofanira kushanyira